ဟတ်ဒစ် ပျက်သွားလို့ — MYSTERY ZILLION
December 2010 edited May 2011 in Hardware
ကျွန်တော် ့Hard Disk Sata 320 ပါ ဘာဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး။ BIOS မှာ၀င်ကြည့်တော့တွေ့ တယ်။ windows မှာတော့ မတွေ့ဘူး။ Windows လည်းတင်လို့မရတော့ ဘူး။ Format ရိုက်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ လုပ်ပါဦး
ဟီး ဟီး .....
ကျွန်တော်က Designer လေ ဆွဲထားတာလေးတွေသွားပါပြီ။
Designer လေ ဆွဲထားတာလေး တွေ ယူချင်ရင်တော့ တခြားစက်မှာ တပ်ကြည့်ပြီး သေချာ စမ်းကြည့်ပါအုံးဗျာ.. ဝင်းဒိုး တင်မ၇တာတို့ ဖောမစ်ချမ၇တာ တို့ကလည်း တခြား အကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဟာ့ဒစ် သေချာ ပျက်သွားပြီလို့ ယူဆ လို့ မရသေးပါဘူး။ တခြား နည်းတွေနဲ့ ကြိုးစားကြည့်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်.. ။
:eek::eek::eek: လုပ်ပါဦး ဖြေကြပါဦး
ဟက်ဒစ်က data cable , power cable တွေ စစ်ကြည့်ပါ...
power cable မကောင်းရင်လဲ bios မှာ တွေ့ရတယ်..ဆက်မတက်ဘူးး..စစ်ကြည်လိုက်ပါ..ကြိုးပဲ အသစ်လဲလိုက်ပါအုံး...အဆင်ပြေမှာပါ
နောက်တာ မဟုတ်ဘူး . တကယ်ပြောတာ . လုံးလုံး ပျက်သွားရင် တောင် ရေခဲ သေတ္တာထဲ နာရီ၀က်လောက်ထည့် ပြီး ပြန်ထည့် . .
ပြီးရင် အဲဒီဒေတာတွေ ရသလောက် backup လုပ် ပေါ့ဗျာ .
ကျွန်တော ်ပြောတာက လုံး၀ကို နည်းလမ်း တွေ ကုန်သွားပြီး အားလုံး က ပျက်တယ် ပြောရင် လို့ ပြောတာနော် . အကောင်းကြီးကိုတော့ သွားမထည့်နဲ့ . ဟီးဟီး
အဲဒီလိုဖြစ်တာက စောစောကပြောသလို့ HD cabel ကြိုးကြောင့်တို့ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မားသားဘုတ်ကနေ မှ ကြောင်ကြောင်နေတာလဲ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ Memory ကိုလည်း ဖြုတ်တပ် ပြန်လုပ်ပြီးတော့ သေချာ စစ်ကြည့်ပြီး ပြန်တပ်ကြည့်ပါ။ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ပြန်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘုတ်က နည်းနည်း ဟောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ်။
IDE Hard Diskဆိုရင် ဆိုင်တွေမှာ IDEtoSATAပြောင်းတဲ့ (USBခေါင်းပါပြီးသား)ကြိုးခေါင်းလေးတွေရှိတယ်။ SATAဆိုရင် SATAtoUSB။ မြန်မာငွေ သုံးရာ့ငါးဆယ်ပဲရှိတယ်။ ဟာ့ဒ်ကို ဖြုတ်ပြီး အဲဒီကြိုးမှာတတ် Usbပေါက်ကနေ ချိတ်ကြည့်ပါ။ ရခဲ့ရင် လိုချင်တဲ့ ဒေတာတွေ ပြန်ကူးပြီး Partition Managerဆော့ဖဝဲတစ်ခုခုနှင့် ဖောမတ်ချ။ MBRပြန်ရေးပြီး ဝင်ဒိုးပြန်တင်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေဘူးပါသည်။
ကျွန်တော့လဲ hardisk နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ ရှိနေတာမို့ ဒီမှာပဲမေးပါရစေ။
-80GB ရှိတဲ့ SATA_HDD နဲ့ သုံးနေပြီး window လဲတက်ပါတယ်။
-500GB ရှိတဲ့SATA_HDD ကိုတွဲလိုက်တဲ့အခါ window logo အထိပဲတက်ပြီး ရပ်နေပါတယ် Numlock မီးလဲမလင်းတော့ပါဘူး ၎င်း 500GB HDD ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ window ပုံမှန်ပြန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်.
SATA POWER/DATA CABLE တွေလဲ လဲလှယ်ထားပြီး တစ်ခါတစ်ရံ BIOS SETTING တွင် 500GB သော HDD မှာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးကြပါ ။
Hiren's Boot CD 10.0 နဲ. Master Boot Record ပြန်ရေးလိုက်ပါလား
ဟုတ်ကဲ့ပါ CD ဝယ်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါမယ် ..
Hard Tools ထဲက Disk Management ထဲမှာ ပါတယ်...လုပ်ႀကည်႔လိုက်ပါ